I-villa ezimele emaphethelweni e-Bormio - I-Airbnb
I-villa ezimele emaphethelweni e-Bormio
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Mara
ISAKHIWO ESIHLANZEKILE FUTHI ASIKWAZI Amagciwane NGOKWEMIHLAHLANDLELA EZINIKEZELWA NGUBANI.
I-villa ethandekayo yama-70s enengadi yangasese nje imizuzu emi-2 ukushayela ukusuka e-Bormio nokuhamba imizuzu emi-5 ukusuka e-Bagni Nuovi Grand Hotel kanye ne-spa.
Ideal for labo abafuna ukujabulela ukuthula noxolo okuyobe kusezweni lweholide egcwele nemvelo futhi aziphumulele futhi abathandi namasondo amabili (yamahhashi mountain ngebhayisikili) unikezwa ukusondela ngokushesha Stelvio Pass Umqansa kanye Cancano amachibi..
Ikhodi ye-CIR: 014071-CNI-00050
I-villa izungezwe ingadi yotshani yangasese lapho ungakhululeka khona ezihlalweni ezinethezekile ezitholakala ngezikhathi ezifudumele futhi usebenzise indawo yokosa inyama noma inhlanzi ngaphandle, nomndeni noma abangani.
Ezihambelini kukhona ibhokisi \_ elondolo elingasetshenziswa njengendawo yokugcina eqhweni eqhweni nasebhuthini ngesikhathi sasebusika kanye nendawo yokugcina ibhayisikili ngezinye izinkathi zonyaka. Ngaphakathi kwebhokisi kukhona nomgqomo wamanzi ozosetshenziselwa noma yikuphi ukuwasha amabhayisikili.
Iphampu yamanzi yokugeza amabhayisikili
Isitoreji se-ski nebhayisikili
Igumbi lokugezela eline-bidet, ishawa nobhavu omncane
ubusuku obungu-7 e- Provincia di Sondrio
Indlu itholakala endaweni enamasu abathandi bemvelo, ukuphumula kanye nezemidlalo jikelele.
Siyohlale sitholakala ezivakashini zethu ukuze zingaphuthelwa lutho ngesikhathi samaholide futhi sizicebise ngokuthi zingakuchitha kanjani kangcono ukuhlala kwazo kulo mhlaba omuhle kangaka.
Lapho ufika uzothola imihlahlandlela namamephu ukuze uhlale unolwazi lwakamuva ngalokho okumele ukwenze.
Siyohlale sitholakala ezivakashini zethu ukuze zingaphuthelwa lutho ngesikhathi samaholide futhi sizicebise ngokuthi zingakuchitha kanjani kangcono ukuhlala kwazo kulo mhlaba omuhl…